Ezona ncwadi zintle zefantasy ezake | Uncwadi lwangoku
Eyona ncwadi intle kangaka
Uncwadi olumangalisayo belusoloko lolunye lweentlobo ezifunwayo, zibonisa ingqokelela yamabali athi ekuhambeni kwexesha aluke umhlaba omtsha kunye nabalinganiswa. Ezi Ezona ncwadi zimnandi Bamele ukuba babe kwiishelufa zabo bonke abo baphakamayo, iimfazwe eziyindumasi kunye nezikumkani zamabali.
1 Eyona ncwadi intle kangaka
1.1 INkosi yeeRingi, nguJRR Tolkien
1.2 Ingoma yomkhenkce nomlilo
1.3 Oothixo baseMelika nguNeil Gaiman
1.4 Ingxelo ye-Assassin of Kings, nguPatrick Rothfuss
1.5 IziKronike zikaNarnia, ngu-CS Lewis
1.6 Ibali eliQinisekayo, nguMichael Ende
1.8 Discworld nguTerry Pratchett
1.9 Inqaba emnyama, nguStephen King
Ifunyenwe ekuqaleni njenge ulandelelwano kwincwadi yakhe yenoveli ethi The Hobbit, INkosi yamasongo yaba yeyona nguqulelo inde kwibali lokuqala elayilwa nguTolkien kwaye yeza yapapashwa kwimiqulu emithathu eyahlukeneyo ngo-1954 nango-1955. Umdlalo obekwe kulo mhlaba odumileyo ophakathi wabantu abancinci, ii-elves kunye ne-hobbits, ubalise ibali lika UFrodo bolson, umlinganiswa ophambili ukhethe ukutshabalalisa isangqa samandla alangazelelwa nguSauron owoyikwayo. I-trilogy yahlengahlengiswa ngumlawuli waseNew Zealand Peter Jackson ngaphakathi 2001 y 2003.
Umdlalo wetrone Liye laba ngumcimbi kamabonwakude onemvelaphi apho imvelaphi yakhe inokufumaneka kwi-saga edumileyo Ingoma yoMkhenkce noMlilo ebhalwe nguGeorge RR Martin kwiminyaka yama-90 kunye nomthamo wokuqala,Umdlalo wetrone, yapapashwa ngo-1996. Okwangoku, imiqulu emihlanu ipapashiwe kwacwangciswa eminye emibini Ukucaciswa kwabo kuyaqhubeka nokuba yinyama enempikiswano, basihambisile kubukumkani obuyintsomi beWesteros, loo ndawo apho ubukumkani obahlukeneyo benza iyelenqe lokulawula isihlalo sobukhosi se-Iron, bengayinanzi ingcinga kunye nezidalwa ezivela emva kwabo njengoko amabali ahlukeneyo eqhubeka.
Oothixo baseMelika nguNeil Gaiman
Kuthathwa njengenye ye ababhali abakhulu beencwadi ezithandekayo Kwiminyaka yakutshanje, uGaiman wafumanisa koothixo baseMelika eyona noveli yakhe emva kokuphumelela kwezinye izihloko ezinje Stardust okanye iSandman Graphic Novel. Ifunyenwe njengenxalenye yeentsomi zaseMelika, iifantasy kunye neentsomi ezivela kwihlabathi liphela, incwadi ibalisa ibali Sombra, indoda esandula ukukhululwa entolongweni kwaye, emva kokubhubha komfazi wayo, ethathe isigqibo sokusebenzela uMnu.
Ngaba ungathanda ukufunda Oothixo baseMelika nguNeil Gaiman?
Ingxelo ye-Assassin of Kings, nguPatrick Rothfuss
Ukudityaniswa phakathi kokukhulu I-sagas emnandi yenkulungwane yama-XNUMX, Igama lomoya, isihloko sokuqala kwi-saga ye Imbali yombulali wookumkani ebhalwe nguRothfuss, kunokwenzeka ukuba yenye ye iinoveli kakhulu original kunye fresh zohlobo. Engaphezulu kwe Iikopi ezingamawaka angama-800 zithengisiwe, le noveli yokuqala yapapashwa ngo-2007 ibalisa ngebali likaKvothe, iarcanist, imvumi kunye nomcebisi othe waba ligqala kule minyaka idlulileyo. Ubungqina bomntu ophambili busebenza njengesiseko sale inoveli yokuqala kunye nenxalenye yesibini, Ukoyika umntu osisilumko, epapashwe ngo-2011.
Kubhalwe phakathi kuka-1959 no-1956 ngu-Lewis, IziKronike zaseNarnia Yiyo I-saga yeencwadi ezisixhenxe zolutsha sele sele kungumlinganiso wohlobo, emva kokuba uthengise ngaphezulu kwe Iikopi ezizizigidi ezili-100 kwihlabathi liphela. Indalo yomlingo evela kwilizwe laseNarnia enabantu abathetha kunye nezilwanyana apho ubukho bengonyama i-Aslan kunye nobukho babantakwabo Pevensie, abafika bevela "kwelinye icala lekhabethe", babonakala. Isihloko sokuqala, Ingonyama, igqwirha kunye ne-wardrobe, yahlengahlengiswa kwi-cinema ngo-2005 ifezekisa impumelelo enkulu yebhokisi, ilandelwa yiPrince Caspian kunye ne -Crossing of Dawn.
Ibali eliQinisekayo, nguMichael Ende
Iincwadi zoncwadi zesizukulwana, Ibali elingenasiphelo yenye ye ezona ncwadi zithandwayo kuncwadi lwamaphupha Kananjalo nokuba yimpumelelo yangoko nangoko emva kokupapashwa kwayo ngo-1979. Ibhalwe ngumbhali waseJamani uMichael Ende, eli bali lenzeka phakathi kobukumkani bukaFantasia nehlabathi apho avela khona umlinganiswa ophambili, uBastian, umfana oquka okwenyani. intsingiselo yencwadi ngokwe-Ende: umbono wokuhlola umhlaba kunye nenyani kwindalo yangaphakathi yomntu ngamnye kuthi endaweni yokumiselwa luluntu. Uloyiso ngokupheleleyo.
Ukuba kukho I-saga yeencwadi ezithandekayo eziya kuguqula ngonaphakade imikhwa yabathengi Kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo eyayinguHarry Potter. Ibhalwe nguJKRowling kwiivenkile zaseScotland apho wayevalelwe khona ngexesha lesigaba sakhe njengomama ongaphangeliyo nongatshatanga, isaga saqala UHarry Potter kunye nelitye lesithandi-sobulumko ngo-1997 ukwazile ukutsala inyambalala yabafundi abasakhulayo kwiminyango yeevenkile zeencwadi, waqokelela indalo yakhe eye yaba sisenzo sehlelo kwaye waguqula ukuziqhelanisa nefilimu kwaba yenye yezona nzuzo zinenzuzo embalini. I-Adventures yomlingo omncinci oqhubeka nokunika isahluko esitsha njengotshintsho lwamva nje lweqonga UHarry Potter kunye noMntwana oqalekisiweyo.
Wafa ngonyaka ka-2015 eneminyaka engama-66, umbhali oliNgesi uTerry Pratchett washiya ngasemva ibhibliyografi eyayithandwa ngabalandeli beentsomi kunye noncwadi lwabantu abadala. Iseti yemisebenzi engaphezulu kweshumi elinxalenye yayo ifakiwe kwi-saga ye-Discworld, isihloko sayo sokuqala, Umbala womlingo, yapapashwa ngowe-1983 Umzobo weLovecraft, iidragons kunye nemingxunya kunye nemimandla eyahlukileyo ephothiweyo ukusuka kulaa mhlaba uthe tyaba uxhaswe ziindlovu ezine, zona zona, eziphumla kwigobolondo leGreat A'Tuin, ufudo olukhulu olubalaseleyo.
Umlingo oyoyikisayo uhlala ethanda ukucoca amabali akhe akrokrisayo (okanye ubuncinci inxenye yawo) ngalawo mandla angaphezu kwendalo kunye nochulumanco amenze ukuba abe ngomnye wabazalisi bexesha lethu. Isaga se Inqaba emnyama kunokwenzeka ukuba ibe lelona linokuqhayisa uninzi lwalo mlinganiswa enkosi Iinoveli ezisibhozo ezibandakanya i-odyssey yomntu ophambili, URoland Deschain, kunye nokukhangela kwakhe kwinqaba yokufanisa emelwe ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo kwinto eyaziwa ngokuba yi-All-World. Umnqamlezo phakathi kweWild West kunye neNkosi yeeRingi ezenza i-saga eqinileyo eguqulelwe kwifilimu engakhange ihlupheke ngokufanayo.
Zithini, ngokoluvo lwakho, ezona ncwadi zamaphupha zibalaseleyo embalini?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Eyona ncwadi intle kangaka
Uluvo lwam lokuthobeka sitsho
Ndiluthandile olu luhlu
Nangona kukho ibali endilithandayo kakhulu, makube ngenxa yedrama kunye nendlela yombhali yokubalisa, ishingUkulangazelela inkwenkwezi´´, umsebenzi awaziwa kakuhle, kodwa kufanelekile kakhulu, ndingacebisa ngokwam kubo bonke abantu, kuba ithetha ngobunyani babantu kunye neziphumo zokuzingca koku, emva kokufunda lo msebenzi mhle ndinenzondo enkulu kuluntu, ngaphandle kwamathandabuzo lelona bali lihle, lihle efikelela kwiimvakalelo zakho, ngaphandle kwamathandabuzo owona msebenzi ugqwesileyo endiwufundileyo, kwaye ukuza kuthi ga ngoku intanda yam, kuthathelwa ingqalelo ukuba ndizifundile uluhlu olubanzi lweencwadi.
Phendula kwimbono yam ethobekileyo
Usuku lomama. Iincwadi ezi-6 zoomama bazo zonke iimeko